अनावश्यक बढि औषधि खानाले के हुन्छ ? यस्तो छ डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव
डिसेम्बर 18, 2019 डिसेम्बर 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments उपचार, औषधि
रोगको उपचारको क्रममा औषधि खानुपर्छ तर कति खाने भन्ने जानकारीको अभावमा औषधिको डोज आवश्यक भन्दा बढी भएमा असर पुर्याउन सक्छ । तर डाक्टरको निगरानीमा गरेको औषधि र कति समय खाने भन्ने तोकेको मात्रा भन्दा वढी आफु खुसी खाएमा असर हुन सक्छ भनेको हो ।
औषधिले रोग निको पार्ने गर्छ तर जे कुराको पनि अत्यधिक प्रयोग गर्दा त्यसले अमृत समान चिजलाई पनि विष बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ । वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अध्ययनले दैनिक २,३ प्रकारको एण्टिवायोटिक औषधि लामो समय सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा खतरा हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
हुनत औषधि मात्रै होइन जुनसुकै बस्तु किन नहोस् बढी सेवन गर्दा त्यसले असर गर्न सक्छ । अनावश्यक औषधिको सेवनले बच्चा तथा युवाहरूलाई स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्या निम्त्याउनुका साथै वृद्धहरूलाई झन् कमजोर बनाउने गर्छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार बढ्दो उमेरका साथै अत्यधिक औषधिको सेवनले दैनिक गर्ने कार्य क्षमतालाई एकदम प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । धेरै उमेर भएका मानिसहरूले दैनिक धेरै औषधिको सेवनले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भनेर पत्ता लगाएको छ । उक्त अध्ययनमा ५० देखि ७० बीचका २०० मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
दैनिक ५,६ प्रकारको औषधि लामो समय सेवन गर्दा शरीरमा कमजोरी निम्त्याउने गर्छ र कमजोरीको सम्बन्ध बढ्दो उमेर, सहनशक्तिमा कमजोरी र राम्रोसँग कुनै पनि काम गर्न नसक्नुलाई मानिन्छ । कमजोरी बारम्बार हुँदा रिंगटा लाग्ने, लडेर चोट पटक लाग्नुका साथै यसै बीच मृत्यु हुने सम्भावना समेत रहेको हुन्छ ।
उमेर बढ्दै गएपछि शरीरमा धेरै खाले स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्छ र त्यस्ता स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्नु औषधि लिनुपर्छ तर अत्यधिक मात्रामा औषधिको सेवनले रोग निको गर्नुभन्दा पनि अन्य समस्या पैदा हुन सक्छ । कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुपर्दा डाक्टरको परामर्श लिएर औषधि सेवन गर्नु राम्रो हुने छ ।
नोट : उपरोक्त कथन अनुसार औषधि सेवन गर्दा आफुखुसी नगरी डाक्टरको परामर्शमा सेवन गर्ने बानी बसालौं भन्ने हाम्रो राय छ ।
← नेपाली भू-उपग्रह नेपाली स्याट-१ ले लियो तीन मुलुकको तस्बिर
महिनावारी हुँदा किन बार्ने ? यस्तो छ कारण →
जनवरी 26, 2019 जनवरी 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1